Apple Inoburitsa iOS 13.5 Beta 3 Iine COVID-19 Yekuzivisa Ekuzivisa IPhone nhau
Apple Inoburitsa iOS 13.5 Beta 3 Ine COVID-19 Yekuzivisa Ekuzivisa
Mushure memavhiki akati wandei achitaura nezve API nyowani iyo Apple neGoogle zviri kuvandudza kurwisa hutachiona hweCoronavirus, Apple yatanga yechitatu Beta yeIOS 13.5 iyo inosanganisira kekutanga nguva iyi nyowani yekuzivisa system yekuratidzwa kune COVID-19.
Apple iri kutora matanho ekutanga kubatanidza muhurongwa hwayo iyo sisitimu yekutevera inokwanisika kutaurirana nevanhu vakatapukirwa neCOVID-19 uye iyo API yakatoverengerwa kekutanga kekutanga Beta iri rechitatu reIOS 13.5. Iyi isiri-inoshanda vhezheni asi ichabatsira ivo vanogadzira izvo zvinoshandiswa izvo zvinoshandisa iyi API kutanga kuyedza uye kubatsira kuvandudza. Rangarira izvo zviremera zvehutano zveveruzhinji chete zvichave nekwaniso yekuita uku, uye inogara ichivimbisa kuvanzika kwakazara kweese data, iyo zvakare isingambo sanganisira iyo geolocation yemushandisi.
Pamusoro peichi chiitiko chitsva, icho parizvino chisingashande, Apple yakagadziridza kuzivikanwa kwechiso uye kuvhura system ye iPhone nekupfeka mask. Chiso ID hachikwanise kukuziva uine mask, haitobvumidze iwe kuti uwedzere kumeso kwako wakapfeka chiyero chekudzivirira ichi, uye hazvina musoro "kubiridzira" hurongwa nenzira dzinotenderera paInternet nekuti zvese zvatinoita kuita kudzikisa kuchengetedzeka kwesystem, chimwe chinhu chisina kukurudzirwa. Zvino, kuvandudza kuzivikanwa, riinhi Chiso ID inoona kuti isu takapfeka masiki zvakananga, inotipa mukana wekushandisa iko kuvhura nekodhi, pasina kumirira kuti system ikundikane.
Pamusoro penyaya idzi muIOS 13.5 Beta 3, Apple yatanga Betas dzakatarisana dzeOSOS, tvOS uye macOS, pasina nhau dzinoti izvozvi dzakakodzera kuongororwa. Parizvino isu hatizive kuti ndeapi mavhezheni ekupedzisira edzidzo idzi achaburitswa, ayo parizvino anongowanikwa kune vanogadzira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 13 » Apple Inoburitsa iOS 13.5 Beta 3 Ine COVID-19 Yekuzivisa Ekuzivisa
Corona Datenspende, iyo yeGerman app yekurwisa iyo coronavirus